Madaxweynaha Somaliland oo si kedis ah loogu arkay Suuq weyn ee Hargeysa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hargeysa – Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Somaliland, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa shalay kormeer kadis ah ku tagay bartamaha suuqa weyn ee magaaladda Hargeysa.
Madaxweynaha oo aan wadan ciidamadii tiknimada ahaa iyo ciidankii faraha badnaa ee lagu yaqaan ayaa salaadii jimce kula tukaday dadweynaha masjidka Cali Mataan ee bartamaha magaaladda Hargeysa ku yaalla,ka dibna salaadii jimce waxa uu kormeer ku tagay goobaha ganacsiga sida ganacsatadda sarifka lacagaha, Dabahka iyo wadooyinka cusub ee dib loo dayactiray.
Madaxweynaha oo dadweynaha dhex lugaynayey ayaa dadweynihii goobaha uu marayey ka ag dhowaa la arkayey iyagoo dabacaayey si ay salaan ula gaaraan.
Madaxweynaha waxa la socday taliyaha booliska Cabdilaahi Fadal iyo Taliyaha ciidanka Madaxtooyada Faysal Kaamil oo aan wadan astaan ciidan iyo dirayskii ciidamadda, balse xidhnaa dhar shacab oo aan laga garanayn dadweynaha la socday madaxweynaha iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumadda.
Qoraal kasoo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in safarkan gadiska ah ee uu ku tagay suuqa weyn ee badhtamaha magaaladda Hargeysa inuu u kuurgalayey xaaladda kala duwan ee shacabku ku sugan yahay, haddii ay noqon lahayd mid ganacsi iyo mid nololeedba.
“Kormeerkani waxa uu daba socdaa ka war haynta iyo xogogal u noqoshada shacbiga, isaga oo Madaxweynuhu xiliyada ku haboon ku soo maro meelaha ay shacbigu u badan yahay ama ganacsiga, isaga oo madaxweynuhu ka duulaya masuuliyada shacbiga, ayuu go’aansaday inuu la qaato Farxada maalinta Jimce ee ay Shucuubta Caalamu-islaamku ay kaga nasanayaan shaqooyinka gaar ahaan Shacbiga Caasimada Hargeysa meelo badana lug ku tagay” ayaa lagu yiri qoraal madaxtooyadda ka soo baxay oo lagaga hadlay safarka gadiska ah ee uu ku tagay suuqweynaha.
Deegaanada Somaliland ayaa ah dhul nabad ah oo dadka halkaas ku nool hormuud ka yihiin, taasoo keentay in madaxdoodu awdood u yeeshaan iney suuqayada ku dhex lugeeyaan, islamarkaana salaadda ku tikadaan masaajidda ku yaalla suuqyada.